Galmudug | Mustaqbal Radio
Home - Galmudug
Shiikh Maxamed Shaakir Cali Xasan Madaxa Xukuumadda Galmudug oo ka geyb galay Shir ay si wadajir ah usoo agaasimeen Wasaaradaha Amniga iyo Haweenka Galmudug looga hadlayay Amniga ayaa ka hadlay Qaabka loo sugi karo amniga. Waxa uu sheegay in Shacabka iyo Hay’adaha Amniga Galmudug iskaashigooda uu ka dhalan karo ka saarista Deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab sida uu hadalka ...
Dhuusamareeb: Cabdullaahi Faarax Weheliye oo ku guuleystay doorashada
Doorashada Kursigii ugu dambeeyay ee Golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug. Doorashadan waxaa ugu cad caddaa Cabdullaahi Faarax Weheliye oo ah Wasiiru dowlaha Wasaaradda arrimaha gudaha Xukuumadda Soomaaliya iyo Maxamed Cilmi Afrax oo horay ugu tartamay Madaxweynaha Galmudug sidoo kalena noqday Wasiirka Qorsheynta Galmudug. Doorashada waxaa sidoo kale kula tartamayay Cabdullaahi Xersi,waxaana natiijada noqotay ...
Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda maamulka Galmudug ayaa lagu waddaa in maanta lagu qabto doorashadda Kursi ka banaan Golaha Shacabka. Guddiga doorashooyinka ayaa shaaciyay in maanta la qaban doono kursigii uu ka geeriyooday allaha unaxariiste Bootaan Ciise Caalin. Wasiiru-dowlaha wasaaradda Arrimaha gudaha Mudane Cabdullaahi Faarax Weheliye & Maxamed Cilmi Afrax, Wasiirkii Qorsheynta iyo xiriirka Galmudug ayaa ku tartamaya kursigii uu ka ...
Xaaf: “Ramadaan maalinka uu dhamaado dhismaha dekadda Hobyo wuu billaabanayaa”
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf,ayaa waxaa uu ka hadlay dhismaha la qorsheynayo in lagu smaeeyo Dekadda Magaalada Hobyo ee Gobolka Mudug. Madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in afartan Sano wax ka badan uu maqlayay in la dhisayo dekadda Hobyo hayeeshee uusan marna arag dekaddaas oo la dhisayo. Ganacsatada iyo dadka wax heysta in ay ka qeybqaataan dib u ...
Xaaf: “Jawaari waa uu ku mahadsanyahay is casilaaddiisa”
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, ayaa ka hadlay iscasilaada la sheegay inuu sameeyay Gudoomiyihii Golaha Shacabka ee baarlamaanka Somaliya Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari). Xaaf ayaa maanta ka dagay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Dhuusa-Mareeb ee Xarunta Galmudug, Isagoo safar uga yimid Dalka Jabuuti oo uu kulamo kula soo qaatay Masuuliyiinta dalka Jabuuti, Waxaana jirta heshiisyo uu soo galay. Madaxweynaha Galmudug ...
Wararka ka imanaya Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Maamulka Galmudug ayaa sheegaya in Ciidamada Dalka Itoobiya ee ku sugnaa Magaaladaas ay isaga baxeen. Ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa Dhuusamareeb ayaa aaday dhinaca Dalka Itoobiya iyada oo aan la ogeyn sababta ay magaaladaas uga baxeen. Ciidanka Itoobiya waxaa ay muddo dhowr Sano ah degganaayeen Dhuusamareeb iyaga oo taageeri jiray Maamulkii Ahlu Sunna ...
Madaxweyne Xaaf oo Jabuuti kula kulmaya Shirkad dib udhis ku sameyneysa Hobyo.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu wadaa in uu u amba baxo wadanka Jabuuti, halkaa uu kula ballansan yahay Madax ka socota Shir dhismo ku sameynayo Dekeda Hobyo ee Gobolka Mudug. Shirkadda uu la kulmayo waxa uu qorshuhu yahay in uu kala hadlo sidii ay u dadajin lahayd dhismaha Marsada Hobyo ...
Mareykanka oo sheegay in 5 ka mid ah AL-shabaab uu ku dilay Galguduud
Dowladda Mareykanka ayaa sheegatay in shan ka mid ah Ciidamada Al-shabaab lagu dilay duqeyn ka dhacday Gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa war uu soo saaray ku sheegay in weerarkaas lagu dilay shan ka mid ah Ciidamada Al-shabaab,waxaa ay intaas ku dareen in aanay jirin khasaare dad shacab ah ka soo gaaray weerarkaas. Warka ka soo ...
Jen.Caanood: ” Howgalladii todobaadkan 156 Al-shabaab ah ayaan ku dilnay”.
Abaanduulaha Ciidamada Xoogga Dalka Jen. Cabdullahi Cali Caanood ayaa sheegay in in ka badan 150 ka mid ah Al-shabaab ay todobaadkan ku dileen Gobollada dalka sida uu yiri. Caanood ayaa sheegay in Ciidamada dowladda ay Gobolka Shabeellaha hoose oo kaliya ku dileen 66 ka mid ah Al-shabaab ayna hayaan Meydadka Ciidanka Al-shabaab ee dagaalkaas ku dhintay. Waxaa uu sheegay in ...
Carabey “Ciidanka Galmudug waxaa loo diyaariyay in ay la wareegaan Deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab”.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi Carabey ayaa sheegay in Saraakiisha iyo Ciidamada Galmudug loo diyaariyay in ay weeraro ku qaadaan Deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Ciidanka ayuu tilmaamay in ay yihiin kuwo isku dhaf ah oo ka kala socda Galmudug iyo kuwa Maamulkii Ahlu Sunna ee Kolkii dambe ku biiray. Waxa uu farta ku fiiqay Xarardheere iyo ...
Galmudug oo sheegtay in ajaanib lagu dilay duqeyn ka dhacday duleedka Ceelbuur
Maamulka Galmudug ayaa sheegay in ugu yaraan 16 Qof oo ka mid ah Al-shabaab ay ku geeriyoodeen duqeyn shalay gelinkii dambe ilaa xalay saqdii dhexe ka dhacday degaanka Dac la yiraado ee duleedka Degmada Ceelbuur. Mursal Sheekh Maxamed Yuusuf Xeeyfoow; oo ka mid ah saraakiisha Maamulka Galmudug ayaa sheegay in dadkaasi ku dhintay weerarkaas ay isugu jiraan Soomaali iyo Ajaanib ...